Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » France Izindaba Ezintsha » I-France ikhiphe imithetho emisha yokuvakasha ezivakashini zaseBrithani
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • France Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ukuhamba Kwezitimela • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
IFrance inciphisa imingcele ye-coronavirus eyethulwe ngoDisemba 18, inciphisa ngempumelelo konke ukuhamba okungabalulekile phakathi kwalawa mazwe womabili phakathi nokwesaba mayelana nokusabalala kwe-Omicron variant.
Izivakashi ezigonyiwe ezisuka e- i-United Kingdom ukuya eFrance ngeke kusadingeka ukuthi kunikeze isizathu esingaba khona sokungena ezweni noma ukuvalelwa yedwa lapho befika.
Ngokusho kukangqongqoshe wezokuvakasha eFrance uJean-Baptiste Lemoyne, umphumela ongemuhle wokuhlolwa kwe-COVID-19 othathe amahora angama-24 ngaphambi kokuhamba. iGreat Britain isazodingeka.
Abahambi abangagonyiwe abavela e- UK noma kunjalo basazodingeka ukufakazela ukuthi uhambo lwabo lubalulekile futhi bazimele bodwa izinsuku eziyi-10.
IFrance inciphisa imikhawulo ye-coronavirus eyethulwe ngoDisemba 18, inciphisa ngempumelelo konke ukuhamba okungabalulekile phakathi kwalawa mazwe womabili phakathi novalo mayelana nokusabalala kwegciwane. I-Omicron okufana.
Ivumela ukungena kwezivakashi ezivela iGreat Britain izohlinzeka ngokuthuthuka okukhulu emkhakheni wezokuvakasha wase-France phakathi nesikhathi samaholide ezikole e-UK sangoFebhuwari.
Ethula lesi sinqumo, Isikhulu Esiphezulu saseBrittany Ferries uChristophe Mathieu ukubize ngokuthi "yimpumuzo enkulu" futhi uthe unethemba lokuthi imithetho yangaphambilini izomela "ukuvalwa komngcele kokugcina kwenhlekelele ye-COVID-19."
Ukuxegiswa kwemikhawulo kuza yize iFrance ngokwayo isibhalise irekhodi lezifo ezintsha zansuku zonke ngoLwesithathu, njengoba sekuqinisekisiwe amacala amasha angama-338,858, ngokusho kweWorld Health Organisation (WHO).
Iphalamende laseFrance njengamanje lisohlelweni lokwethula ukuphasiswa kwe-COVID-19 okungavimbela ngempumelelo abantu abangagonyiwe empilweni yomphakathi. Lokhu kuqubule imibhikisho esabalele ezweni lonke ngempelasonto lapho abantu abangaphezu kuka-100,000 bephuma bezophikisana nalezi zinyathelo ezintsha. Umthethosivivinywa usuphasiswe yindlu ephansi futhi manje kufanele uthole ukwesekwa kwethimba lezigele ngaphambi kokuthi uqale ukusebenza ngokusemthethweni.